Uhlu Lwami Lokumaketha Oluku-inthanethi ku-Oda Elibekwe Phambili | Martech Zone
NgeSonto, uDisemba 2, i-2012 NgoLwesithathu, uDisemba 12, 2012 Douglas Karr
Kunethoni lezinto ezidinga ukufeza ukusebenzisa ngokugcwele isu lokumaketha online, kepha ngivame ukumangazwa ukuthi izinkampani zibeka into ngayinye ohlwini lokuhlola. Njengoba sithatha amaklayenti amasha, sibheke ukuqinisekisa ukuthi amasu anomthelela omkhulu afezwa kuqala… ikakhulukazi uma kulula. Ukusikisela: ukumaketha okuqukethwe nokukhangisa ngemidiya yezokuxhumana akulula kangako.
Iwebhusayithi - Ingabe inkampani inayo iwebhusayithi evusa impendulo evela kuzithameli zakho ukuthi ingumthombo wolwazi othembekile nokuthi umkhiqizo noma insizakalo izoba lusizo ezidingweni zezivakashi?
ukuzibophezela - Ingabe isiza sinayo indlela yokuthenga noma yokucela impendulo esivakashini? Uma ungathengisi umkhiqizo, leli kungaba yikhasi lokufika nefomu lokuqoqa imininingwane yezivakashi ukuhweba ngokubonisa noma ukulanda uhlobo oluthile.
Kukhuluma - Ini analytics amathuluzi onawo wokulinganisa umsebenzi futhi akusize ukuthi uthuthukise ukusebenza kwakho konke kokukhangisa online?
Sales - Inkampani ilandelela kanjani kubavakashi abazibandakanya? Ingabe idatha ithwetshulwe ku-CRM? Noma iqala inqubo yokumaketha ezenzakalelayo ukuthola amaphuzu bese iphendula ekuholeni?
imeyili - Ingabe unohlelo lwe-imeyili oluhlinzeka amaklayenti njalo ngokuqukethwe okubalulekile kanye / noma amathemba ngokuqukethwe okuzowabuyisela emuva kusayithi lakho futhi ukuwaguqulele kumakhasimende?
Hambayo - Ingabe isiza senzelwe ukubukwa kweselula nethebhulethi? Uma kungenjalo, uphuthelwa izivakashi eziningi ezingafuna ukwenza ucwaningo ngomkhiqizo wakho kepha ziyahamba ngoba isiza sakho asilungiselelwe ukubukwa kwazo.
Ukucinga - Manje njengoba usunesayithi elihle nenqubo eqinile yokuthola imikhondo, ungalikhulisa kanjani inani lemikhondo efanelekile? Isiza sakho kufanele sakhiwe kufayela le- uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe olulungiselelwe ukusesha. Okuqukethwe kwakho kufanele kukusebenzise amagama angukhiye ngempumelelo.
Local - Ngabe izivakashi ezifuna umkhiqizo noma insizakalo yakho zifuna zona esifundeni? Ngabe ukuthuthukisile okuqukethwe kwakho ukukhuthaza imikhiqizo nezinsizakalo zakho esifundeni? Ungafisa ukwengeza amakhasi lokho khomba ukusesha kwasendaweni imigomo. Ibhizinisi lakho kufanele lifakwe ohlwini lwemikhombandlela ye-Google neye-Bing.
Izibuyekezo - Ingabe zikhona izingosi zokubuyekeza zezinhlobo zemikhiqizo nezinsizakalo ozihlinzekayo? Ngabe ibhizinisi lakho noma umkhiqizo wakho ubhalwe kuzo? Ingabe unayo indlela yokushayela izibuyekezo ezinhle kulawo masayithi ngamakhasimende akho amanje? Amasayithi afana Uhlu luka-Angie (iklayenti) kanye neYelp bangashayela ibhizinisi eliningi!
Okuqukethwe - Ingabe unayo indlela yokushicilela ngokungaguquguquki okuqukethwe kusizinda sakho okubalulekile kuzethameli zakho ezihlosiwe? Ukuba nebhulogi yebhizinisi kuyindlela enhle yokubhala okuqukethwe kwakamuva, okuvamile futhi okufanele okudingwa yizithameli zakho. Sebenzisa imidiya ehlukene ukuheha izethameli ezahlukahlukene… okubhaliwe kokuthunyelwe kwebhulogi, izithombe kumashadi, izibuyekezo ze-instagram kanye ne-infographics, umsindo kuma-podcast, nevidiyo ku-YouTube naku Vimeo izibuyekezo. Futhi ungakhohlwa amathuluzi wokusebenzisana! Izibali namanye amathuluzi ayamangalisa ekuheheni nasekubandakanyeni izithameli.
Social - Unayo i-akhawunti ye-Twitter? Ikhasi le-LinkedIn? Ikhasi le-Facebook? Ikhasi le-Google +? Iphrofayili ye-Instagram? Ikhasi le-Pinterest? Uma ukwazi ukuthuthukisa okuqukethwe okuhle ngokungaguquguquki futhi ugcine umugqa ovulekile wezokuxhumana, ngezenhlalo, namakhasimende akho namathemba, ezenhlalo zingasiza ukukhulisa umyalezo wakho kwamanye amanethiwekhi afanele amathemba ngokwakha umphakathi wabalandeli. Ubasebenzisa kanjani abalandeli bakho ukuqhubekisela phambili ibhizinisi lakho?
Promotion - Manje njengoba usunazo zonke izindlela zokukhiqiza, uphendule futhi ukhulise umyalezo wakho, sekuyisikhathi sokuwukhuthaza nawo. Ukusesha okukhokhelwayo, okuthunyelwe okuxhasiwe, ukukhangiswa kwe-Facebook, ukukhangisa nge-Twitter, ukukhangiswa kwe-Youtube, ubudlelwano bomphakathi, ukukhishwa kwabezindaba… kuya kuba lula futhi kuthengeka kakhulu ukukhuthaza okuqukethwe kwakho kwamanye amanethiwekhi afanele. Ungahle ungakwazi ukungena kulawa manethiwekhi ngokusebenzisa okuqukethwe okuhle kuphela, kepha ukufinyelela kwakho kuvame ukuhlinzekwa ngokukhangisa.
Ukuzenzekelayo - inani lama-mediums kanye namanethiwekhi likhula ngokuya liyinkimbinkimbi nsuku zonke, kepha izinsizakusebenza esihlinzeka ngeminyango yezentengiso azikhulisi ngesilinganiso esifanayo. Lokhu kwenza i-automation ibe yinto edingekayo kulezi zinsuku. Amandla okushicilela umlayezo ofanele ngesikhathi esifanele, ukuqapha kanye nezicelo zomzila kusuka kunoma iyiphi inethiwekhi bese uyinika insiza elungile, amandla wokushaya amaphuzu bese uphendula ngokuzenzakalela kumikhombandlela ngokususelwe ezingeni labo lokuzibandakanya, nezindlela zokuqoqa le datha ngohlelo olusebenzisekayo… ukuzenzekelayo kuyisihluthulelo sokukhulisa ukumaketha kwakho okuku-inthanethi.
Diversity - lokhu kungahle kungenzi uhlu oluningi, kepha ngikholwa ukuthi ukuba nenethiwekhi yochwepheshe ukukusiza ngemizamo yakho yokumaketha online kubalulekile. Iningi lochwepheshe bezentengiso linokukhethekile abanethezekile ngakho. Kwesinye isikhathi banethezekile kangangokuba indlela abayiqondayo ibaluleke kakhulu futhi lawa amanye amasu alahlekile ngokuphelele. Buza uchwepheshe wezentengiso we-imeyili, ngokwesibonelo, ngokwakha umphakathi we-Facebook futhi bangakuhleka - yize izinkampani eziningi ziqhuba amabhizinisi amaningi nge-Facebook. Ukuboleka kubuchwepheshe benethiwekhi yakho kuvame ukukunikeza ukuqonda ngezifundo eziningi, amathuluzi amaningi, namathuba amaningi wokuthuthukisa imizamo yakho yokuthengisa online.
Testing - Ngaso sonke isikhathi sokuphindaphindwa kwawo wonke amasu, ithuba lokwenza i-A / B nokuhlolwa kwe-multivariate yilona okungafanele linganakwa. (Empeleni angikunakanga lapha futhi ngiyabonga URobert Clarke of I-Op Ed Marketing, siyingezile!)
Lokhu ngukuqala kwami ​​njengoba ngihlola imizamo yebhizinisi yokuthengisa online kepha kungenzeka kungabi eyakho nganoma iyiphi indlela. Yini enye oyifunayo kucebo lokumaketha online? Ngiphuthelwe yini? Ngabe i-oda lami lezinto ezibaluleke kakhulu liyasuswa?
Ngixoxe ngalolu hlu ku-podcast yakamuva:
Tags: ukukhangisabrandUkuguqulwadesignizikhangiso ze-facebookukusesha kwendawomarketingUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukumaketha onlineukuthuthukisaukusebenzisa ngokugcwele injiniSesha Marketingseotabletiwebhusayithi
Dec 3, 2012 ku-11: 22 AM
I-blog enhle uDouglas, ngingeza futhi i-CRO (Ukuguqulwa Kwezinga Lokuguqulwa) ngokusebenzisa i-A / B nokuhlolwa kwe-Multivariate ohlwini - isiza lingenziwa kuphela ngokuhlolwa, ukuhlolwa, ukuhlolwa 🙂
Dec 3, 2012 ku-11: 44 AM
Okuvelele, uqinisile impela - ngizokungeza lokho!
Dec 3, 2012 ngo-12: 15 PM
Ngiyabonga uDouglas. Eceleni, ngibona iDelivra ingumxhasi wakho we-imeyili (ekhoneni eliphezulu kwesokudla). Sisebenze nabo futhi singabalandeli abakhulu, sibancoma kakhulu 🙂
Dec 3, 2012 ngo-1: 55 PM
UNeil nenkampani yakhe bayamangalisa, uRobert. Bayinkampani esebenza ngezandla namakhasimende abo… kuyamangalisa ukuwabuka ekhula.